Ku Saabsan Dugsiga Hoose Excelsior | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Dugsiga Hoose ee Excelsior: Waa dhaqan heer sare ah oo ku saleeysan cunug
Shaqaalaheena Dugsiga Hoose ee Excelsior waxay u heellan yihiin inay ka caawiyaan ardayda inay ogaadaan kartidooda ugu sareysa jawi badbaado iyo kobcin leh. Dugsigeena, ardaydu waxay ogaadaan fursado cusub oo barasho iyo ballaarinta xirfadahooda. Carruur ahaan, waxaan fursad u leenahay inaan gacan ka geysano qaabeynta mustaqbalka maalin kasta!
Himilada Dugsiga Degmada Minnetonka, oo ah beel ka gudbeysa qeexitaannada dhaqameed ee heer sare iyo halka riyadu ku socoto, waa in la hubiyo in ardayda oo dhami ay saadaaliyaan oo ay sii wadaan himilooyinkooda ugu sarreeya iyagoo u adeegaya wanaagga ugu badan, iyada oo loo marayo baridda iyo barashada kuwaas oo:
Shaqsi kasta qiimee oo kobci
Ku dhiirrigeli qof walba hammi aad ku sarayso kalsooni iyo rajo
Ku diyaari waxyaabaha laga filayo ee kicin kara guusha aan caadiga ahayn ee fasalka iyo nolosha
Dugsiga Hoose ee Excelsior - Sidee ayay wax walba ku bilowdeen!
Bishii Meey 1856, Dugsiga Sare ee Excelsior wuxuu albaabada u furay si uu u soo dhoweeyo kooxdiisii ugu horreysay ee ardayda. Waqtigaas, dugsigu wuxuu ahaa kaliya qol alwaax ah. Laakiin markay ahayd 1857 magaalada Excelsior waxay lahayd aqal dawladeed oo laba dabaq ka kooban. Dhismahan ayaa ku gubtay dhulka 1899, markaa dhisme cusub oo siddeed qol ka kooban ayaa la dhisay. Sidoo kale 1899, Dugsiga Sare ee 'Excelsior School' ayaa duubay taariikh kale: waxay ahayd sanadkii Excelsior noqday degmo dugsi madax-bannaan.
Kajawaabida baahiyaha bulshada soo kordheysa, Dugsiyada Sare ee Excelsior waxay dhisteen dugsi sare sanadkii 1915. Dugsigan sare waxaa laga dhisay goobta ku teedsan Galpin Lake. Ku dariddii ugu horreysay ee dhismahan waxaa la dhigay 1929. 1949, Dugsiyada Sare iyo kuwa ku hareeraysan waxay dareemeen baahida loo qabo in la xoojiyo si ay si fiican uga jawaabaan baahiyaha xaafad si xawli ah u koraysa Dugsiga Sare ee 'Excelsior School' wuxuu ka mid noqday Nidaamka Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka.
Sannadkii 1958, Dugsiga Hoose ee Excelsior wuxuu ku dhashay qaab dhisme cusub oo hal sheeko ah. Tan iyo markaas, dhismihii weynaa ee ku tiirsanaa Dugsiga Hoose ee Excelsior wuxuu badalay cinwaankiisa marar badan - laga bilaabo dugsiga sare, ilaa heer sare, xarunta bulshada, xarunta weyn. Sannadkii 1993, dhismihii hore waxaa loo isticmaalay markii ugu horreysay in lagu dejiyo fasalada afraad iyo shanaad ee Dugsiga Hoose ee Excelsior gebi ahaanba.
Dugsiga Hoose ee 'Excelsior Elementary School' wuxuu wali yahay xubin lagu faano ee Degmada Minnetonka Public Schools District # 276, oo ka kooban lix dugsi hoose, laba dugsi dhexe iyo hal dugsi sare.
Dugsiga Hoose Excelsior /